Ifektri - IXiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co, Ltd.
INDLELA IMikhiqizo YENZIWE NGAYO KWI-JWT？
Unemibono, futhi sinethimba lobuchwepheshe ukusiza ukuguqula imibono yakho ibe isampula yomzimba, Kanjani? Ngaphandle konjiniyela, okubaluleke kakhulu imishini. Ngithanda ukukunika ngemuva kwecala lokuvakashela umhlangano wethu ngamunye ngamunye, ake sihambe!
I-Silicone Yokuxubha Indawo yokusebenzela
Imvamisa, lesi yisinyathelo sethu sokuqala,
Lo mshini we-Milling usetshenziselwa ukuxuba izinhlobo ezahlukahlukene zezinto zokwenziwa zeSilicone kuya ngokusebenza komkhiqizo ohlukile, ngokwesibonelo, Imibala nokuqina. Noma yimuphi umbala kungenzeka njengoba ufisa, Ubulukhuni obuvela ku-20 ~ 80 Shore A kuya ngezidingo zakho.
I-Rubber Vulcanization Molding
Indawo yokusebenzela enomshini inomshini wokubumba obumba okwenziwa okungu-18 (200-300T).
Lesi yisinyathelo esibucayi kakhulu sokuguqula i-Silicone Material ibe yimo yemikhiqizo yokwakheka. Ingakwazi ukukhiqiza izingxenye eziyinkimbinkimbi & ezahlukahlukene zomumo kuncike kumdwebo weklayenti, hhayi kuphela ekubumbeni i-Silicone noma i-Rubber impahla, Ungahlanganisa futhi i-Plastiki noma i-Metal nge-Silicone, noma yikuphi ukwakheka kungenzeka.
Umshini Wokubumba we-LSR (Liquid SIlicone Rubber)
Umshini wokubumba we-silicone wokubumba ungakhiqiza imikhiqizo ephezulu kakhulu ye-silicone. Umkhiqizo ungalawulwa ngaphakathi kwe-0.05mm. Izinto ze-Silicone kusuka emgqonyeni kuya kothango ngaphandle kokungenelela komuntu ukuqinisekisa ukuthi yonke inqubo yokukhiqiza ayinangcoliso.
Umshini ungakhiqiza imikhiqizo esetshenziswa embonini yezokwelapha, ka-elekthronikhi kanye neyokugeza.
Umsebenzi wePulasitiki Wokujova
Ukufakwa komjovo kusetshenziselwa ukukhiqiza imikhiqizo yepulasitiki.
Sine-setha engu-10 yomshini wokubumba we-Injection wokubumba nge-othomathikhi yohlelo lokuphakelwa & ingalo yokufakelwa, inganikeza izinto zokwakha & ikhiphe umkhiqizo osuqedile othomathikhi. Imodeli yomshini kusuka ku-90T kuye ku-330T.
Indawo Yokusebenzela Yokuhluza Ngokuzenzakalelayo
Isifutho sokupenda sokuhlanza Igumbi elihlanzekile.
Ngemuva kokufafazwa, imikhiqizo izoba kumugqa we-18m IR ngqo ngokubhaka, ngemuva kokuthi umkhiqizo usuqediwe.
Ukuphrinta kwesikrini kuyindlela yokuphrinta lapho kusetshenziselwa khona i-mesh ukudlulisa uyink ku-substrate, ngaphandle kwezindawo ezenziwe ukuthi zifakwe kuyinki ngepensela evimbayo. I-blade noma i-squeegee idluliswa esikrinini ukugcwalisa i-mesh evulekile nge-uyinki, bese kuthi isitebhisi esibuyele emuva sibange isikrini sithinte isitho esingezansi komugqa lapho sithintana khona.
Umsebenzi wokuphrinta wesikrini
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izinkinobho zerabic ze-silicone zivame ukusetshenziselwa i-laser ukuthuthukisa imiphumela yokukhanya emuva. Nge-laser etching, kusetshenziswa i-laser enamandla amakhulu ukukhetha ukunyibilika nokukhipha upende ezindaweni ezithile zesendlalelo esiphezulu. Lapho usuvele upende, ukukhanyisela emuva kuzokhanyisa ikhiphedi kuleyo ndawo.
Ukuhlolwa kuyinto esemqoka yokuqiniseka ukuthi imikhiqizo yethu icacisiwe futhi ihlangabezana nezidingo zamakhasimende, sizohlola izinto ezingavuthiwe, umkhiqizo wokuqala wokubumba, inqubo yaphakathi nendawo nemikhiqizo yokugcina ngesikhathi se-IQC, i-IPQC, i-OQC.